यसकारण फुल्छ असमयमै कपाल - ज्ञानविज्ञान
जन्मजात: एक वा धेरै ठाउँमा कपाल नहुनुलाई कंजेनाइटल भनिन्छ। जुन जन्मेको केहि समयपछि नवजात शिशुको कपाल झर्नु शरीरको कार्य प्रणाली अनुरुप नै हुन्छ। केहि दिनपछि स्वत: नयाँ कपाल पलाउन थाल्छ।
यस किसिमको अवस्था कुनै खास प्रकारको रोगको संकेत वा एलोपसिया पेटर्न पनि हुन सक्छ। टाउको बीच भाग वा दुबै साइडबाट कपाल कम हुँदै जानु (मेलपेट्रन) पैत्रिक या कुनै अज्ञात कारण हुन सक्छ।
शरीरको कुनै स्थान बिषेशको कपाल झर्नुलाई एलोपसिया एरिएटा भनिन्छ। यसमा अन्डाकार या गोलोकारको रुपमा कपाल झरेको देखिन्छ। एकै साथ अनिश्चित स्थानबाट एक-एक गरी कपाल झर्नुलाई डिफ्युजन पैटर्न भनिन्छ।
यो अवस्था देखिनु भनेको औषधिहरुको अनुचित र अनावश्यक प्रयोगको सकेत हो। आँखीभौंको बाहिरको कपाल झर्नु कुष्ठरोग या मिकस्सोडिमाको संकेत हो। यसैगरी कडा, पातलो र हल्का मुलायम तर चाडै टुटने कपाल कुपोषणको संकेत हो।
यसैगरी महिनावारी बन्द भएपछि पुन: हार्मोन्सको स्तरमा बदलावको कारण कपाल टुटने या फुल्ने क्रम बढ्न थाल्छ। प्रायजसो टियुबरक्लुसिस (क्षयरोग) भएका मानिसहरुको टाउको या शरीरको कुनै भागमा गोलो-गोलो दाद हुने गर्दछ। जसको फलस्वरुप कपाल पनि झर्न थाल्छ।
यसको अलावा अत्यधिक मानसिक चिन्ता या शारीरिक मेहनत, केमिकलयुक्त सावुनले कपाल धुनाले टाउकोमा सोरायसिस (छाल सम्बन्धि) रोग हुन सक्छ। यसबाट चाँया (डेन्डड्रफ) उत्पन्न भइ कपाल झर्ने कारण बन्न सक्छ।
होमियोप्याथिक उपचार : होमियोप्याथिकमा रोगीको उपचार गर्दा रोगीको मानसिक एवं शारीरिक लक्षणका साथै उसको पारिवारिक, सामाजिक अवस्था, उसको ईच्छा, अनिच्छा, भावना आदि कुराहरुलाई समेत मध्यनजर राखेर समष्टिगत लक्षणको आधारमा उपचार गर्ने प्रवधान छ। कपालको समस्याको लागि रोगीको लक्षण अनुसार निम्न लिखित औषधिहरुको प्रयोग गरिन्छ।
औषधिहरु : थाइरायडिनम, लाईको पोडियम, एसिडफाँस, फासफोरिक एसिड, नेट्रम म्युर, पाईलोकोपरस, बेसिलिनम, आर्निका, केन्थरिस, एकिलिप्टा, आस्टिलेगो, सल्फर, कल्केरिया कार्ब, चाईना, ईग्नेशिया, सिफिलिनम, हिपर सल्फर, मर्क्युरस, कार्वोभेज, ग्रैफाइटिस, सल्युरिक एसिडको प्रयोग लाभदायक मानिन्छ। उपरोक्त औषधिहरु आफ्नो स्थानीय चिकित्सकसंग परामर्श लिई सेवन गर्नु उचित हुन्छ।
Don't Miss it केटि मान्छे मा हुनुपर्ने ३२ गुणहरु
Up Next खटिरा आएर हैरान हुनुहुन्छ ? यदि यसो हो भने यस्ता घरेलु उपाय अपनाउनुहोस्
आमाबुबाहरुले बच्चाहरुको दूधे दाँतलाई महत्वपूर्ण ठान्दैनन् । यसको सट्टामा अर्को दाँत आउने भएकोले त्यसलाई महत्व नदिइएको हो । तर दूधे…
खानपानमा : खानामा हरियो सागसव्जी अण्डा दूध, फलफुल माछा मासु खानु राम्रो हुन्छ । साथै आवश्यक मात्रामा पानी समेत पिउनु…
केराको फूल खादा कुन कुन रोग भगाउन सकिन्छ ? जन्नुहोस
पेटको रोग निको गर्छः केराको फुल खानामा हल्का हुन्छ र पेटमा कम लोड पर्छ । यदि पेट फूलेको छ वा…
यस्ता छन्, जाडो मौसममा केशलाई सफा र सुन्दर राख्ने तरिका
जाडो महिनामा चिसोबाट बच्न कतिपय मानिसहरु हिटरको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यसले ताप त दिन्छ तर केशमा भएको कोमलता पनि…